Hirmanaa fi hubanoo uumuu iratti - Project dldl/ድልድል
Hirmanaa fi hubanoo uumuu iratti
Ergamni projektii karaa amantaa fi qo’annaa amayaa fi qama gargartoota hirmachisuun darara adaa qabessa qo’anoowaan kallatti adda adda sakata’uu danda’uu dha. Yeroo amma pirojekktiin lubbotta mana amantaa ortodoksii darara adaa qabessa off irraa ittisuu irratti akka dalagan qophessu dha. Lubonni hubannoo tiyolojii umun yaada adaa qabessaa fudha’aa fi wa’ee saalaa dhimma kan irratti midhaa isaan fidan hirisuu dha. Dbalataniis pirojektiin dhunfaa dhaabilewan hirmachisuun dhimaa amantaa ta’ee irratti fi qo’attotta amayyaa irratti hubanoo guddisuu (bal’isuu) debbi hawaasaa barbaachisaa ta’ee akka kennan gochuu dha. Walumaa gallatti amantaa adeemsa darara adaa qabessa hambisuu irratti gahee isaan qaban ola’aa ta’uu issatiin agarsiisuudha kalattii adda addaani fi yaada walqarqaaruun walti fiduu dhaf rakkoo furuu dha.